शास्त्र भन्छ : यी ७ ब्यक्तिको घरमा भुलेर पनि कहिल्यै खाना नखानुस् ! - Purbeli News
शास्त्र भन्छ : यी ७ ब्यक्तिको घरमा भुलेर पनि कहिल्यै खाना नखानुस् !
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक ०४, २०७४ समय: ११:००:११
१- ब्याजमा ऋण दिने ब्यक्ति : शास्त्रका अनुसार ब्याजमा ऋण दिने ब्यक्तिको घरमा खाना नखाएको राम्रो हुन्छ । गरुण पुराणले ब्याजमा ऋण दिने ब्यक्तिलाई अत्याचारी मानेको छ । यस्ता ब्यक्तिले अरुमाथि अत्याचार गर्ने हुँदा यस्ता ब्यक्तिको घरको खाना खाँदा धर्म नाश हुन्छ र पापको हिस्सा बनिन्छ ।
२- चरित्र हिन ब्यक्ति : गरुण पुराणमा नैतिकरुपमा चरित्रहिन ब्यक्ति स्त्री वा पुरुष जो भएपनि त्यस्ता ब्यक्तिको घरमा खाना नखानु भनेको छ । परस्त्री वा परपुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नेहरुको घरमा खाना खान नहुने उक्त पुराणमा लेखिएको छ । यस्ता ब्यक्तिको घरमा खाना खाँदा पापको भागी आफू पनि भइन्छ ।
३-तेश्रो लिङ्गी : पुराणका अनुसार तेश्रो लिङ्गीहरुको हातको खाना खानु पाप मानिन्छ । यिनीहरुलाई दान दिनु तर अन्न ग्रहण नगर्नु भनेर शास्त्रमा उल्लेख छ ।
४- तामसी : तामसिक बस्तुको सेवन गर्नेहरुको घरमा पनि अन्न खान नहुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यस्ता ब्यक्तिको घरमा अन्न खाँदा पापको भागी बनिन्छ ।